पोखराको डम्पिङ साईडमा भेटियो यस्तो, नागरिकको स्वास्थ्यमा के गर्दै छ महानगर ? (भिडियो ) – Complete Nepali News Portal
पोखराको डम्पिङ साईडमा भेटियो यस्तो, नागरिकको स्वास्थ्यमा के गर्दै छ महानगर ? (भिडियो )
पोखराको शहरबाट निस्कने फोहोरहरु पोखरा १५ को बाच्छेबुडुवामा फालिन्छ । पछिल्लो समय पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको निर्माण कार्य पूरा हुन लाग्दा अब पोखराको फोहोर कता बिर्सजन गर्ने भन्ने चिन्ता माहानगरलाई छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १३ का अध्यक्ष दर्शन लामा भने अब अन्र्तराष्ट्रिय एयरपोर्ट बनेसंगै नयाँ डम्पिङ साईडको खोजी भएको बताउँछन् । उनका अनुसार महानगरले पनि बिभिन्न कम्पनीहरुलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिएकोले फोहोर व्यवस्थापनमा खटिने मजदुरहरुको बारेमा पनि महानगर चिन्तित भएको बताएका छन् ।
पोखरा महानगरलाई सफा र सुन्दर बनाउने कुरामा आफ्नो पहल जारी रहने समेत प्रतिबद्धता दर्शन लामाले गरेका छन् । हेर्नुहोस् कार्यक्रम स्वाथ्य जीवनका लागी रक्षा पोखरेलले दर्शन लामासंग गर्नुभएको कुराकानी ।